DEG DEG: Wasiiraddii kasoo laabtay Puntland ee DFS oo afka furtay, Cadeeyeyna wixii ay kala kulmeen Siciid Deni.
October 9, 2019 NEWS 1
MUQDISHO(P-TIMES) – Wasiiro katirsan Xukuumadda Faderaalka Soomaaliya oo xalay kusugnaa magaalada Boosaaso ee Puntland, oo ay kula kulmeen Madaxweynaha Siciid Cabdullaahi Deni ayaa markii ay galabtay dib ugu laabteen Muqdisho, waxay kahadleen wixii ay la kulmeen.
Wasiiraddu, waxay sheegeen in ay Puntland u tageen sidii ay udhexgali lahaayeen maamulka ay ka soo jeedaan iyo dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, balse waxay sheegeen in ay Puntland diiday in ay gabi ahaanba arrimahaas kala hadlaan wasiiradda.
Wasiirka Arrimaha dibada Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in Madaxweynaha Puntland soo dhaweeyey wada hadal guud oo la yeesho.
Wasiiraddu, waxay kaloo cadeeyen in ay Puntland mawqif adag iska taagtay arrimaha Jubbaland oo ay ka wada hadleen, una sheegeen in ay ka baaqsadaan ka qeybgalka Caleema-Saarka Axmed Madoobe, balse waxay sheegeen in iyagoo jooga Boosaaso uu ka dhoofay Madaxweynuhu.
Xubnahan, waxay kaloo tilmaameen in ay isku dayeen in ay xal keenaan balse lala garan waayay oo ay ka socon waayen dhinaca Puntland, oo ay sheegeen in ay ku adkeysteen mawqifkoodii siyaasadeed.
Siddan, waxay sheegeen in ay u sameynayeen sidii lays kugu soo dhaweyn lahaa Hoggaamiyaasha Siyaasadda Soomaalida, gaar ahaana iyaga masuuliyad gaar ah ka saarneyd deegaanada ay kasoo jeedaan ee Puntland.
Warkan ay shaaciyeen Wasiiraddii ka laabtay Puntland ayaa ahaamid ay xalay baahisay PUNTLANDTIMES, oo ogaatay in aysan dhinacyadu si fudud u wada hadlin oo uu Madaxweynaha Puntland si cad ugu sheegay mawqifka Puntland in aan marnaba la bedeli karin.
Hadaan kafalodo wasirada dhalasho ahaan ka sojeda puntland kana mid ah Xukumada Muqdisho,marka ugu horeysa ma’ah wax talo ah ama Rayi ku Aadan dadka aay matalan,hadey siyasad tahay ama dhaqale wax lagu horumarinayo puntland,waxad meshas ka’arkeysa in aaysan wasiradasi lahaan wax Awood & talo toona,markay puntland yimadan wa la so dirsada.